Dọkịnta Brandt Magnetight Afọ na-emerụ emerụ akpụkpọ ahụ na-eweghachi nyocha ihe nkpuchi ihu - Ịma Mma
Ihe nkpuchi ihu a na -eji igwe ndọta iji mee ka akpụkpọ ahụ gị sie ike, anyị nwalere ya
Ahụrụ m ezigbo nkpuchi ihu n'anya - na -agba mmiri, na -enwu enwu, na -eme nkọwa, ị kpọrọ ya aha. Naanị site na ịdị nso, ndị enyi m na ndị ezinụlọ m enwetala nko. (Adịghị m ọbụghị na -ele gị, Papa.) Mana n'ezie, enwere ụzọ ka mma ịgwọ akpụkpọ ahụ gị wee nwee mmetụta ozugbo ozugbo n'ụlọ karịa iji nkpuchi? Echere m na ọ bụghị.
Naanị mgbe m chere na m ga -ahụ (ma gbue ya), ngwaahịa ọhụrụ na -apụta wee gosi m ihe m na -amaghị na m na -efu. Ihe atụ: ihe Dr. Brandt Magnetight Age-Defier Skin na-eweghachi nkpuchi ndọta . Nke a abụghị usoro nkịtị. Ihe nkpuchi a, dị ka aha ya si dị, na -eji irighiri ihe magnetik mee ka akpụkpọ ahụ gị sie ike, na -eme ka ndọlị na ihe ịrịba ama nke ịka nká pụta ihe. Ahuhu? Kedu ihe nke ahụ pụtara? Oleekwa otú nke ahụ si arụ ọrụ? Abụghị m onye sayensị. Oge ikpeazu m mesoro 'mmekọrịta electromagnetic' bụ n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị. Na ihe ndọta ... na akpụkpọ ahụ m ? Nke a bụ nsọpụrụ masking 101 na m chọrọ ịbanye. Yabụ, nke ahụ bụ ihe m mere.
Nke a bụ ka obere nnwale sayensị m siri gbadata.
Nzọụkwụ 1: Iji malite, ewepụsịrị m etemeete m niile wee saa ihu m maka mmalite ọhụrụ. Maka nsonaazụ kacha dị irè ma a bịa n'ihe nkpuchi ọ bụla, achọghị m ka ihe ọ bụla guzogide ụzọ ihe ndị na -eme ya na -abanye na akpụkpọ ahụ m. Anọkwa m na -enwe nsogbu dị mma n'oge ahụ (ee, nke ahụ bụ mkparị), nke, dị ka ọ na -akpasu iwe, bịara baara m uru ma emechaa mgbe m na -eche maka ihe nkpuchi n'oge. Ọ gụsiri m agụụ ike ịhụ otú nkpuchi ahụ ga -esi metụta nkewa ahụ — mee ka ọ dajụọ, kpasuo ya iwe, ma ọ bụ mee ihe ọ bụla.
unyi ihe na-eme na enyi gị nwanyị
Nzọụkwụ 2: Oge itinye. Ihe nkpuchi ahụ na -abịa na obere spatula (yabụ na ị naghị ebufe nje ọ bụla na ihu gị), mana mgbe ị ga -efufu spatula dị ka m mere, ị nwekwara ike iji mkpịsị aka gị, kwa - hụ na ị sara ha tupu oge eruo. Etinyere m ihe mmesapụ aka n'egedege ihu m niile, na -ezere mpaghara anya m. Ọ bụ ezie na usoro nke ígwè na-adị oke oke, udidi ya dị nfe karịa ka m chere (dị ka mousse a pịara apị, dịtụ ntakịrị.) Agaghị ekwu maka ya, ọ na-efegharị dị ka silk. Ozugbo m mepere mkpuchi m nwere ike ịnụ isi mmanụ lavender dị mkpa, nke bụ a ukwu gbakwunyere. Ka ọ dị ugbu a, ihe a niile na nnukwu atụmatụ m na -aghọgbu uche m wee chee na anọ m na spa.
Nzọụkwụ 3: Na-esote, echere m nkeji iri ka m hapụ nkpuchi ahụ ka ọ bụrụ ihe: ọkachasị, ka ihe ndị na-egbochi ịka nká wee rụọ ọrụ. Peptides siri ike na nkpuchi ahụ na -enyere aka mee ka akpụkpọ ahụ sie ike karị, na tourmaline ojii, mineral na -enye ume, na -enyere aka ịgbakwunye ọkụ. Ka ngwaahịa ahụ nọdụrụ na akpụkpọ ahụ m, ọ naghị enwe mmetụta iwe ma ọ bụ ihicha. N'ezie, oge niile ọ dị m ka ihe nkpuchi ahụ na -eme ka obi dajụọ m ma mee ka akpụkpọ ahụ m jụrụ oyi.
Nzọụkwụ 4: Usoro mwepụ: nke ị na -eme site na kechie magnet triangular nke na -abịa na nkpuchi n'ime anụ ahụ. Gịnị mere nke a ji dị mkpa? Akụkụ ndọta dị na nkpuchi abụghị ihe egwuregwu, ozugbo magnet wee bulie ha, ha bụ ọbụghị na -akpụ akpụ. Akụkụ ahụ na -arụ ọrụ dị ka ihe mgbochi dị mkpa n'etiti ndọta na irighiri ihe, na -eme ka ọ dị mfe ihicha ya ozugbo ị mechara - tufuo anụ ahụ ma emechaa. Ọ bụrụ na anụ ahụ ị na -eji dị gịrịgịrị, kechie ya ugboro abụọ ka ọ ghara ịgbaji ozugbo ị tinyere ya na nkpuchi. N'ihi na ozugbo ngwaahịa ọ bụla rapaara na ndọta, ọ na -esiri m ike ịpụ.
Nzọụkwụ 5: Ugbu a akụkụ na -atọ ọchị, na -ewepụ ya n'ezie. Ewere m magnet kpuchie anụ ahụ wee weta ya n'ihu m, malite na ntì m ma na-ebuli ya elu. Ọ bụ ihe nzuzu ka m ga -esi na -eche ndọta na -atụtụ ngwaahịa a, na -eme maka mwepụ kachasị dị ọcha na nke kachasị dị irè. Otu ngagharị ngagharị mere ka akpụkpọ anụ chara achacha chacha achacha nke enweghị ihe fọdụrụ. Ọ mara mma na -eri ahụ, n'ezie. Enwere m ike ịhụ ka magnet n'onwe ya na -atụtụ nkpuchi, ọ bụghị naanị anụ ahụ na -ehichapụ ihe niile. Nke a bụ ebe 'mmekorita electromagnetic' na uru ịka nká na-abatakwa. Ka ị na-ebugharị ndọta n'obere akpụkpọ ahụ gị, ọ na-enwe 'mmetụta ike-ubi' nke na-eme ka akpụkpọ ahụ nwee ike ịgbanye ọkụ ma nwee mmetụta karịa ka oge na-aga. Yabụ n'otu oge nkpuchi ahụ na -ewepụta nsị, ọ na -emekwa ka ikike akpụkpọ ahụ gị nweghachi ike. (Gụọ: O kwesiri ime ka akpụkpọ ahụ gị yie obere.)
Nzọụkwụ 6: Ozugbo m wepụrụ ihe nkpuchi kpamkpam (nke na -eweghị oge ọ bụla: magnet dị gịrịgịrị dịkwa mfe ịgagharị n'akụkụ ọnụ imi m ka ọ gafere na ntì na ọkpọiso m), m ghọtara ngwa ngwa na enwere otu nzọụkwụ ọzọ. . Ọ bụ ezie na m ka yipụrụ ihe nkpuchi, akpụkpọ ahụ m na -enwu ugbu a na obere mmanụ. Kedu onye maara ihe nkpuchi na -asachapụ nwere ike ịdị oke mmiri mmiri ?! Mmanụ ndị ahụ dị mkpa lavender ahụ m kwuru na mbụ hapụrụ ihu igirigi n'ihu m ọbụna mgbe nkpuchi ahụ kwụsịrị. Eji m nwayọọ kwọọ ihe ndị a n'ime akpụkpọ ahụ m maka ihe dị ka nkeji maka obere okomoko ikpeazụ.
Mkpebi ahụ: Nke a bụ ihe nkpuchi dị ịtụnanya juputara na nkọwa: na -akọwa ma na -agba mmiri, nsonaazụ ozugbo mana uru dị ogologo oge. Mgbe ọ bụla m chetara ihe nkpuchi na-asachapụ, m na-eche maka nchacha na nhicha nhicha nke na-esochi (ebe a na-asa ahụ m ebiela site na oke nke ndị ahụ). Enweghị ọgba aghara ebe a n'agbanyeghị, ekele maka anụ ahụ na duo magnet. Naanị otu ihe na-akpasu iwe nke usoro mwepụ bụ ịnwe ịfụgharị anụ ahụ mgbe niile-mgbe otu swipe, a ga-ekpuchi ọnụ anụ ahụ na ngwaahịa.
Enwekwara m ike iri nri na -edozi ahụ - ọ na -eme ka obi ruo m ala, na -eme ka ọ na -acha ọbara ọbara karịa mgbe m malitere. Echere m na iwepụ ngwaahịa a na ndọta kama ịchacha ihe ọ bụla emere ka ọ dị nro karịa. Mmanụ ndị dị mkpa lavender na -eme ka ahụ dị jụụ ma na -agba mmiri, na -eme ka akpụkpọ ahụ m nwee mmetụta nro, igirigi na ihe oriri, ewepụghị ya ma ọ bụ kpọọ nkụ ma ọlị. Enwere m obi anụrị na m ga-eji ya (akara ahụ na-atụ aro ugboro abụọ n'izu, ma n'ụtụtụ ma ọ bụ n'abalị) iji malite ịhụ uru ịka nká ogologo oge. N'ihi na ọ bụ ezie na akpụkpọ ahụ m adịchala ọcha mgbe m wepụsịrị ya, echere m na uru ogologo oge na -arụ ọrụ karịa akụkụ nchacha miri emi ozugbo. Ọ bụ ezie na enwere m ike ịhụ ndọta na -eburu ngwaahịa ahụ n'onwe m, m ga -anwale ya ọzọ wee hụ ma m nwere mmetụta n'ezie na nkpuchi ahụ na -ewepụta adịghị ọcha. n'okpuru akpụkpọ ahụ m, yana. Otú ọ dị, maka nke mbụ, ahụrụ m n'anya.
Maka Jen na -anwale ụdị a, lelee:
- Agbalịrị m Anya Watercolor -ọmarịcha ụdị etemeete anya kacha mma
- Nke a $ 78 Brushless 'Lash Instrument' dị ka enweghị Mascara Wand nke ị hụtụrụla
- Agbalịrị m Kendall Jenner's Smoky Eye Trick ma nweta ọtụtụ otuto
agba kacha mma iji tee ntutu isi nchara nchara
kedu ihe hello kitty dị
akụkọ banyere anyị ashley i
kedu mgbe isi awọ na -alaghachi